Sidee looga takhalusaa aboorka guriga dhexdiisa: hababka halganka
Waxaa jira tiro ka mid ah digaagga dhifka ah, kuwaas oo doonaya in ay gurigooda ku helaan xoolo hodan ah. Digaagga buluuga ah ee Andalusian waa xayawaan la mid ah. Tani waxay u muuqataa in ay tahay mid aad dhif u ah, ka sokow, bacrin ah. Waa sababtoo ah "nadir" oo muujinaysa sifooyinka noocaan ah waa in la barto, tan iyo markii aad sameysid qalad qalad ah, xayawaanka ayaa si fudud u dhiman kara.
Waa maxay muusikada qiimaha leh ee balaadhan?
Dibedda dhirta caanaha leh waa kuwa ugu weyn ee hindida. Tani waa farqiga ugu weyn ee qabiilka. Wareegtada waxaa lagu dhaliyey Maraykanka oo loogu talagalay taranta warshadaha. Waxay si dhakhso ah u heshay caan ah sababtoo ah waxay haysataa tiro fara badan oo aan la dafiri karin, taas oo ay ugu wacan tahay faa'idada ah ee tarankooda ay aad u sarayso.
Noocyada ugu fiican ee berriga
Dadku waxay ku hawlan yihiin gusevodnost tan iyo wakhtiyadii hore, hadda waa laanta ugu muhiimsan beeraha casriga ah. Dunida oo dhan, berriga ayaa ku koray beeraha gaarka loo leeyahay iyo beeraha yaryar ee qoysaska ah, waxayna yihiin kuwo labaad oo muhiim ah ka dib digaagga. Waxay ku faraxsan yihiin hilibka dhadhan fiican leh, beerka cuntada (waa soo saaraha ugu horreeya ee Faransiiska), hoos u dhac, baaluq iyo, dabcan, quruxda.
Sharaxaad ka mid ah jilista ugu caansan ee jihada jilicsan Adler silver qaarka
Waxaa ka mid ah noocyada badan ee jira, noocyada iyo subspecies ee digaagga, waa arrin aad u adag in la doorto waxa adiga kugu haboon. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaadan ku dhicin magac, laakiin waa nooca jihada ee wax soo saar. Dhamaantiis, tani waa sida ugu fiican ee aad u dhalin doonto shimbirahaaga gudaha. Tusaale ahaan, jihada ugu caansan waa hilib-hilib, taas oo kuu ogolaaneysa inaad si fiican isugu geyso qiyaasta ukunta sare ee digaagga iyo sifooyinka wanaagsan ee digaagga ay soo saaraan.
Kaadi diga of Poltava: waxaan ku tiirsanaan wax soo saarka iyo fududaynta dayactirka
Xayawaanka xoolaha, nuucyada cusub ayaa ah noocyada xayawaanka xoolaha ah, oo la abuuray farsamo si ay u dhaafaan wakiillada hadda jira ee noocyada isku midka ah. Sida caadiga ah, tan waxaa loo sameeyaa si loo kordhiyo wax-soo-saarka ama tayada kale ee muhiimka ah. Markaad naas-nuujinayso digaag cusub, doorka ugu muhiimsan waxaa ka ciyaaraya ukum-gelinta iyo astaamaha hilibka, taas oo ah shuruudaha ugu muhiimsan ee doorashada shimbirta loogu talagalay.
Waxaan koraan curia Fireol tayada alaabta tayada leh
Riyadii beeraley kasta oo digaaga ah waa nooc ka mid ah digaagada oo ukuntooda si fiican u qaadi kara waxaana loo kala saaraa wax soo saarka hilibka wanaagsan. Laakiin inta badan waa mid dhif ah, oo haddii shimbirtu ay muujiso karti aad u sareysa, markaa tamarta oo dhan waxay ku baxdaa arrintan, koritaanka muruqyada muruqyada waa mid xun oo gaabis ah.
Chickens Rhode Island: Maxay yihiin sifooyinka iyo faaiidooyinka ee taranka?
Si aad u daaqdo digaag waa wax faa'iido leh. Ka dib markaad mahadsan tahay, shimbirahaas gurigaaga ayaa had iyo jeer noqon doona ukun cusub iyo hilib dhadhan fiican leh, taas oo ka sareysa tayada kuwa iibiya dukaamada. Inta badan, qoysku had iyo jeer waa dammaanad qaadka iyo dabeecada deegaanka, taas oo ganacsatada iyo khabiirada PR ay isku dayayaan inay si aad ah ugu tiirsanaadaan shaashadaha telefishanka.
Waxaan soo saarnaa oo ka waraabinaynaa caanaha Sussex-ga ee xayawaankooda
Qoysaska, digaagga ayaa bilaabay in ay jilaan muddo dheer ka hor bilowgii xilligeena, sidaas darteed nuucyo badan ayaa leh taariikh dheer oo asal ah, taas oo aan waxba ka qaban taranka taranka. Ka dib oo dhan, si ay u helaan hilib badan iyo badeecooyin ukunta, xitaa beeralayda daaqsinka ah ee hore waxay isku dayeen in ay doortaan oo keliya maadooyinka ugu wanaagsan waxayna kadibna dacaayadiyaan.
Kala duwanaanta iyo sifooyinka digaagga dubay
Digaagga - mid ka mid ah digaagga ugu fiican. Waxay awood u leeyihiin in ay la qabsadaan xaalado nololeed oo kala duwan, waxay ku farxaan indhaha iyagoo leh midab qurux badan oo baaluq ah waxayna siinayaan milkiilayaashooda leh dhadhan fiican oo caafimaad leh - ukumo, hilib iyo hoos. Inkasta oo maanta, dad badan ay bilaabeen inay ka baxaan nadaafadda, digaagga ayaa weli ah saaxiibada ugu daacadsan ee dadka.
Digaagga ayaa ka mid ah shimbiraha ugu horreeya ee naasuhu u suurtagashay in ay guriga degaan. Waxay keenaan faa'iidooyin aan faa'iido lahayn, maadaama ay u oggolaanayaan in aysan helin oo keliya qadar badan oo ah hilib dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale noloshooda oo dhan si ay u siiyaan milkiilayaasha leh ukun caafimaad leh. Xitaa dadka casriga ah, kuwaas oo isku dayaya in ay si kasta oo ay u fududeeyaan noloshooda iyo ka tagaan taranta xoolaha gudaha, ka takhalusi digaagga ugu yaraan.
Sida loo qalabeeyo qolka indoutok sii kordhaya
Duck Muscovy, taas oo sidoo kale waa duck hilibka, waa digaag weyn oo weyn. Ugu horreyntii, indo-dalladaha ayaa ku baahsan Mexico iyo dhammaan Koonfurta Ameerika. The Aztecski hore ayaa awooday in ay rabbo iyo guri guri shimbiraha, ka dibna guuleystayaasha Spanish u keenay Europe, laga bilaabo halka ay ku faafin dunida oo dhan.
Caadooyinka quudinta, quudinta shuruucda ducks moos
Ducks Muscovy (Indoor) ayaa ka yimid Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika, laakiin ma ahan kuwa caan ka ah dalalka Yurub. Waxay ka dhex taagan yihiin noocyada kale ee ducks oo leh hilib tayo sare leh, iyo sidoo kale beerka dufanka, taas oo ka mid ah cuntooyinka ladhan. Waxaa jira fikrad ah in tani ay tahay isku xidhka turkika iyo nuucyada, laakiin haddii aan tixgelino mowjada musqusha sida xaaladdan oo kale, waxay u tahay marxalad ku-meel-gaar ah oo u dhaxaysa naaska iyo goose, sababtoo ah waxay leedahay dhammaan sifooyinka aasaasiga ah ee mid kasta oo shimbirahan ah.
Noocyada dhirta duur-joogta ee xilliga xagaaga
Inad ku hawlan tahay digaagga digaaga, milkiilaha kasta waa inuu xisaabiyaa faa'iidada waxtarka ee noocyada iyo noocyada qaarkood. Inkasta oo dadka qaarkood ay ku dhashaan ducks iyo digaagga si ay u helaan ukun, qaar kale ayaa diiradda saara hilibka. Qodobkani, waxaanu bixinaynaa feejignaanta sifooyinka Indo-ducks-noocyada noocyada ka mid ah jihada hilibka.
Maxaad ka heli kartaa ubaxyo
Dad badan oo naga mid ah waxay jecel yihiin in ay ku quudiyaan xamaam ama shimbiro kale. Laakiin ma ogtahay waxa cawaaqibka laga yaabo inay sugayaan adiga? Hadda waxaan ka hadli doonaa cudurada ugu caamsan ee xamaamyada loo gudbiyo aadanaha. Cudurada kiniisadda: ogaanshaha, daaweynta iyo ka hortagga, khatarta bini-aadannimada Dhab ahaantii, waxaa jira tiro aad u tiro badan oo cuduro kala duwan ah, kuwaas oo intooda badan ay ku soo baxaan jirka bini-aadanka.
Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa qaar ka mid ah dabeecadaha quudinta guriga. Waxaad wax ka baran doontaa hargabka shinnida, muddada ukunta, dhalashada dhallinyarada iyo shuruudaha shimbiraha quruxda badan. Ma taqaanaa? Turkestan (mid ka mid ah magaalooyinka ugu da 'weyn ee ku yaala Kazakhstan), dagaalyahannada labiska digaaga ayaa ah nooca isboortiga.
Wax soo saarka madax-bannaan ee coop digaag ah ee dacha
Cottage ma aha oo kaliya dhismo leh guri ku habboon iyo dhowr sariirood. Haddii aad wakhti badan ku qaadan kartid wadankaada, dhaqso ama ka dib waxaad yeelan kartaa fikrad aad ku heli kartid hudheel khaas ah. Waxay ahayd arrin sidan ah oo aan go'aansanay in aan tixgelinno su'aasha ah sida loo sameeyo guryaha dhoobada ah ee dacha.
Talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan diyaarinta coop digaag leh gacmahaaga
Haddii aad go'aansato in aad dalka ka bilowdo ama digaagga digaagga, laakiin waligaa la kulmin hoyga guryeynta iyaga, maqaalkani waa adiga. Waxaan kuu sheegi doonaa si faahfaahsan sida loo sameeyo coop digaag leh gacmahayaga. Maxay tahay in ay ahaato heerkulka iyo iftiinka digaagga ee digaagga? Digaagga uma dulqaadan karo hargab mana ku habboonayn jiilaalka.
Qof walba waxaa loo isticmaalaa xaqiiqda ah duurjoogyada waa xayawaanka duurjoogta ah waxaana laga heli karaa oo kaliya xayawaanka, laakiin hadda waxay noqotay caan duurjoogta guriga. Tani ayaa looga doodi doonaa maqaalkeena. Ma taqaanaa? Magaca cilmiga ah ee duurjoogta ee Giriigga micnaheedu waa "ubax-geel." Daraawadka gudaha waa nooc ka mid ah duurjoogta duurjoogta ah ee ku nool Afrika.
Qiimaha ukunta cunnada
Ma aha in qof kastaa rabo in uu ka iibsado ukunta dukaanka digaagga ee lagu beeray beeraha digaaga. Tani waa la fahmi karo. Digaagga qashinka loogu talagalay ukunta - ballanqaadka alaabta tayada leh miiskaaga. Xaaladaha qaarkood, taranka lo'da ee guriga ayaa noqon kara dakhli dheeraad ah - shirkad yar oo qoys ah, sababtoo ah ukumo guri ayaa ka baxsan warshad mid ka mid ah.
Waxaan baranaynaa ugxanta ugu fiican ee digaagga ornamental
Digaagga qurxinta ee ka midka ah munaasabadaha iyo jecelayaasha ayaa ku raaxaysanaya caanno aan isbeddelin. Noocyadaasi maaha wax badan oo ukumo ama hilib ah, sida raaxada iyo kala duwanaanshaha xayawaanka nool ee aaggooda. Noocyada qurxinta waxaa lagu kala soocayaa qaab dabiici ah, muuqaal aan caadi ahayn, isku-dhafnaan, dhalaalid, boodh midab leh.